Njirimara, mmalite na mkpa nke nkwụnye ego Loess | Network Meteorology
N’akụkụ ụfọdụ nke ụwa anyị, anyị pụrụ ịhụ otu ụdị ọdịdị ala nke ihe ndozi nke ifufe bu bugara na-ekpuchi. Nke a ka a na-akpọ ọdọ mmiri. Maka ụdị ọdịdị ala a iji wee mepụta, ikekwe, oge nke ọtụtụ puku afọ gafere, ebe oke ikuku mmiri na-aga n'ihu na-edebe ihe a.
N'isiokwu a anyị ga-ekpughe mkpa dị n'ụgbọ mmiri Loess na njirimara ya bụ isi.
1 Ọdọ mmiri Loess na nguzobe ya
3 Njirimara nke anụ ahụ nke Loess tank
Ọdọ mmiri Loess na nguzobe ya
Dịka anyị kwuburu, ọ ga-ewe ọtụtụ puku afọ tupu ikuku amalite imepụta ihe ndị a nke nta nke nta. N’akụkụ ụfọdụ nke ụwa anyị na-ahụ ụdị ọzụzụ a ma ọ bụ ihe ịtụnanya. Mgbe mmiri iyi Loess na-asọ site na mmiri iyi ma ọ bụ belata iji mee okporo ụzọ, ọ na-enwekarị usoro kwụ ọtọ. Nke a bụ ebe ị nweghị ọkwa a na - ahụ anya dị ka ọ dị.
Nkesa nke nkwụnye ego Loess na-egosi na e nwere ọtụtụ isi ihe eji arụ ọrụ nke usoro a: nke mbụ bụ ebe nchekwa ọzara na-agbakọta na ike nke ikuku, na nke abụọ bụ ide mmiri nke glaciers. Sourceszọ ọzụzụ abụọ a bụ ọrụ maka Loess.
Ihe kachasi ike na oke mmiri Loess na ụwa bụ ndị anyị nwere ike ịhụ na ọdịda anyanwụ na mgbago ugwu China. E guzobere ego ndị a site na iji ụgbọ mmiri na-ebuga site na mbara ọzara sara mbara nke Central Asia. Offọdụ n'ime usoro ndị a bụ nchịkọta nke mita 30 ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị. Na ọkpụrụkpụ, nkezi e guzobere na nha nke 100 mita. Ngwurugwu a na-agbakọ na, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ihe na-enye agba agba na odo odo.
N'aka nke ọzọ, na United States, nkwụnye ego Loess dị ịrịba ama n'ọtụtụ ebe ebe njem ụgbọ mmiri na-adị ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, na South Dakota, Nebraska, Missouri na Illinois, ha bụ ebe anyị nwere ike ịchọta ụlọ ndị a. A pụkwara ịhụ ha na ụfọdụ Osimiri Columbia na northwest Pacific.
Enwere mmekọrịta dị n'etiti nkesa nke Loess yana mpaghara mpaghara kachasị mkpa nke Midwest na steeti Washington. Nke a abughi ihe ndapụta ma ọlị, mana o nwere ọtụtụ ihe ime ya. Ọ bụ n'ihi na ala ndị e si na sedimenti a mee nke ahụ edebe site na ifufe so na ndị kacha arụ ọrụ n'ụwa. N'ihi nchịkọta nke ihe, ndị na-edozi ahụ na-agbakọkwa. Ọ ghọrọ ezigbo mpaghara na-eme nri maka ọrụ ugbo.
N'adịghị ka ihe na-eme na nkwụnye ego nke China, nke sitere n'ọzara, ndị nke United States na Europe bụ ngwaahịa ndị na-enweghị isi nke glaciations. Ikpokọta na ịgbaze ruo ọtụtụ puku afọ, na-ebute usoro na nkwụnye ego nke sedimenti nke na-eme ka nri ala. N'aka nke ọzọ, ego ndị ahụ e ji ájá kpụọ adịghị amị mkpụrụ ma ọlị. Naanị ha na-eme ka ihe owuwu nwere ezigbo ala ma nwee obere ọmụmụ.
Isi mmalite nke nkwụnye ego nke Loess na United States na Europe bụ irighiri ihe ndị na-agba agba. Mgbe glaciers bidoro ịlaghachi azụ n'ihi ịrị elu nke okpomọkụ, ọtụtụ ndagwurugwu mmiri ejirila sedimenti mechie site na mmiri agbaze nke ice. N'okwu a, onye na-ebugharị ihe ahụ abụghị ifufe, kama ọ bụ mmiri gbazee. Ifufe arụkwala ọrụ, ebe ọ na-efe n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ọ kpochapụrụ ma bufee ọtụtụ sedimenti ndị dị na mbara ala mmiri.
A na-esi na nke kacha mma mee ka ihe ndị ahụ sie ike. Na ngagharị ha, ha dara dịka blanket na mkpọda ọwụwa anyanwụ nke ndagwurugwu. Enwere ike ikwenye site na usoro ndị a site na eziokwu ahụ bụ na a na-ahụkarị nkwụnye ego Loess n'akụkụ lee lee ebe a na-achọta ebe ndị na-ekpocha mmiri kpụkọrọ akpụkọ. Ọmụmaatụ, a na-enwekarị ekele na mpaghara nke osimiri Mississippi na Illinois ma ha na-adịwanye njọ ka ebe dị anya site na ndagwurugwu na-arịwanye elu.
Ihe akaebe nke mmalite a bụ mkpụrụ osisi angular nke a pụrụ ịhụ na ihu igwe na-eme Loess. Enwere ike ịhụ na ha bụ otu ihe ahụ dị ka ndị anyị nwere ike ịchọta na ala nke oke nkume nke emepụtara na egweri glaciers.
Njirimara nke anụ ahụ nke Loess tank
Nkwụnye ego ndị a bụ 10% nke ala niile n'ụwa. Okwu Loess pụtara na ala rụrụ arụ ma mejupụta 50% silt na ụrọ 50% ọzọ. Dika ebe di anya site na ebe anwuru oku na-abawanye, ego nke nkpuru a na - etinye na - ebelata ma, ya mere, ego a na - ebelata na oke na ogologo.
Isi mmalite nwere ike ịbụ mpaghara ma ọ bụ dị anya. N'ihi ya enwere Loess dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, wayo ma ọ bụ carbonate bụ ụfọdụ n'ime njirimara njirimara dị na Loess. Carbondị na ego nke carbonate anyị nwere na-adabere n'usoro nguzobe tupu na mgbe ntinye nke silt na mmiri ozuzo na-agbakọta ha.
N'ịbụ ndị tọpụrụ, ala ndị ahụ esighi ike. Ha na-esiwanye ike mgbe akọrọ, mana ha ka nwere ike ịda ngwa ngwa mgbe a gbanyere ya na mmiri. Ala nwere ike ibu n'etiti 10 na 15% mmiri na porosity nke dịgasị n'etiti 34 na 60%. Ihe mgbanwe ndị a na-agbanwe dabere n'ụkọ ụrọ ma ọ bụ ájá anyị nwere.
Dịka anyị kwurula na mbụ, a na-achọsi ha ike itinye ego maka ọrụ ọkụkụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Nke a na-eme ka ọrụ ịkụ ihe dị mfe ma hụkwa ezigbo ikuku ka ala wee nwee akụrụngwa na mgbọrọgwụ nke ihe ọkụkụ na-eto n'ọnọdụ dị mma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nkwụnye ego Loess.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ebe nchekwa mmiri